ဓာတ်ပုံသတင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 82
ဓာတ်ပုံသတင်း/အသံဖိုင် ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုသိမ်မြို့သို့ ယနေ့ သွားရောက်ပြီး ဒေသခံလူထုနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံများ – Messenger သတင်းဂျာနယ်၊ အသံဖိုင် – DVB No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 82 of 82«1...7879808182